Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 + Serial Key | ကိုနန္ဒ
Home » Computer Software , Computer Software နှင့် နည်းပညာ » Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 + Serial Key
Posted by nan da Posted on 22:33 with No comments
13,11,2013 ရက်နေ့က Update လေးထွက်လာတဲ့ Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02 လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ System ထဲက Application တွေကို Uninstall လုပ်တဲ့အခါ Your Uninstaller! Pro က အရမ်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး Uninstall လုပ်ရင် ကျန်တတ်တဲ့ Registery ဖိုင်တွေ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေကို Your Uninstaller! Pro က တခါတည်း ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။
Your Uninstaller! Pro လေးက ဆော့ဝဲလ် Uninstall ဖို့ မကပဲ တခြား အရမ်းအသုံးးဝင်တဲ့ Feature တွေ ပါဝင် ပါသေး တယ်။ Startup Manager, Disk Cleaner, Start Menu, Trace Eraser, File Shredder, Windows Tools အစရှိတဲ့ Feature တွေပါဝင်ပါတယ်။
Startup Manager ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပြူတာဖွင့်ရင် မလိုအပ်တဲ့ Auto လန်းနေတဲ့ ဖိုင်တွေ ကို Startup Manager နဲ့ ပိတ်ထားလိုရပါတယ်။ အဲလိုပိတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုး ကတော့ ကွန်ပြူတာဖွင့်တာနဲ့ သိပ်မစောင့်ထိတော့ပဲ အလုပ်လုပ် အရမ်းမြန်စေပါတယ်။
Full Version သုံးရအောင် Serial Key ပါ တင်ပေးထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့် မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
>>>>>Download Your Uninstaller! Pro 7.5.2013.02<<<<<